पपुवान्यूगिनीमा ७.९ म्याग्निट्युडको ठूलो भूकम्पपछि सुनामीको खतरा | News Dabali
पपुवान्यूगिनीमा ७.९ म्याग्निट्युडको ठूलो भूकम्पपछि सुनामीको खतरा
December 17, 2016 | 9:23 pm
रोयटर्स,२ पुस– रोबौलको १ सय ५७ किलोमिटर पूर्वीय भाग पपुवान्यूगिनीमा शनिवार ७.९ म्याग्निट्युडको ठूलो भूकम्प गएको अमेरिकी भूगर्भ विभाग युएसजीएसले जनाएको छ । र, त्यस क्षेत्रमा सुनामी जान सक्ने खतरा रहेको चेतावनी दिइएकाे छ।
भूकम्प लगतै पपुवान्युगिनीमा ठूलो मात्रामा सुनामी जान सक्ने खतरा रहेको प्यासिफिक वानिङ सेन्टर पीटीडब्लुसीले जनाएको छ । भूकम्पको जानकारी गराउँदै पपुवान्यूगिनीको न्यू आयरल्याण्ड क्षेत्रमा १०३.२ किलोमिटर क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुगेकाे जनाएको छ ।
पीटिडब्लुसीले सुनामी यही तीन चारघण्टा भित्रमा आउन सक्ने खतरा रहेको चेतावनी दियाे । साथै इण्डोनेशिया, दी सोलोमन आयरल्याण्ड,पोनपेई,चुयुक,नाउरु,कोस्राई र भानुआटुको समुन्द्री तटमा सुनामीको छाल आउन सक्ने जनाएकाे छ ।
न्यूजल्याण्डले पनि सुनामीको खतरा रहेको जनाएपनि हवाई र अष्ट्रेलियाको समुन्द्री तटमा सुनामीको खतरा नरहेको जनाएकाे छ ।
संघीयता लागूपछि खारेजीमा परे दर्जन कार्यालय, करोडौंका संरचना बेवारिसे
पर्वत / संघीयता कार्यान्वयनसँगै खारेजीमा परेका दर्जन बढी कार्यालय २०७५ को सुरुआती समयमै खाली भए । तीन तहको सरकार गठनसँगै खारेजीमा…
गण्डकीको नयाँ मन्त्रिमण्डल : असमावेशी, असन्तुलित !
भेगीय रुपमा पनि असन्तुलित । पोखरा/नयाँ सरकार गठन भएको करिब डेढ महिनापछि गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छ । गठबन्धनबाट…
पर्वतमा ४ हजारभन्दा बढी निजी आवास पुनर्निर्माण
पर्वत । पर्वतमा ०७२ को भूकम्पबाट घर भत्किएका ४ हजार १६३ निजी आवास पुनर्निर्माण भएका छन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण…
काठमाडौं , साउन ९/प्रतिनिधिसभाको शुक्रबार बसेको बैठकमा सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदबीच आरोप–प्रत्यारोप चल्यो। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले संसदीय…
फेरि निषेधाज्ञा होला त ?
काठमाडौं , साउन ९/ देशभर कोरोना संक्रमणदर स्थिर हुँदा पुनः संक्रमणदर घटाउन बन्दाबन्दी हुन सक्ने आँकलन थालिएको छ । अहिले नेपालमा…